မအူပင်မြို့တွင် နေအိမ်အပြင်ထွက်သည့်ပြည်သူများအားMask မတပ်၍ ရိုက်နှက်နေ - Myanmar Pressphoto Agency
COVID-19 Maubin militarycoup MPA Myanmar News
Covid_19 August 27, 2021 ·0Comment
ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့တွင် နေအိမ်ပြင်ပသို့ ထွက်သည့် ဒေသခံ ​ပြည်သူများအား စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီး Maskတပ်ဆင်မထားသူများအား စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အပြစ်ပေးရိုက်နှက်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
နေအိမ်ပြင်ပသို့ထွက်သည့်ပြည်သူအများစုမှာ စျေးဝယ်ထွက်ကြသည့်သူများသာဖြစ်ပြီး မေ့ လျော့ပြီး Maskမတပ်မိပါက စစ်ကောင်စီတပ် များက ဝါးရင်းဒုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်မှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
”အများအားဖြင့်တော့ Maskကတပ်ကြပါတယ်။ ​အကြောင်းမဲ့ကြီးအပြင်ထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ ဈေးဝယ်ထွက်ကြရင်းနဲ့ တချို့တလေ Mask တပ်ဖို့မေ့တာမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့။ Mask မပါရင် ဝါးရင်းဒုတ်နဲ့ရိုက်တယ်။ သူတို့ကတော့ နောက်မမေ့အောင်အပြစ်ပေးတာလို့ပြောတယ်” ဟု မအူပင်မြို့ဒေသခံတစ် ဦးက MPAသို့ ပြောသည်။
မအူပင်မြို့ ရွှေဘုန်းမြင့်ဘုရားကြီးအရှေ့ဘက်မအူပင်မြို့မြို့ရှောင်လမ်း၊ မအူပင်မြို့နယ်အ တွင်းကျေးရွာများမှ မြို့ပေါ်သို့စျေးဝယ် လာရောက်သည့် လမ်းနေရာများတွင် စစ်ကောင်စီ တပ်သားများက ဝါရင်းဒုတ်များကိုင်ဆောင် စစ် ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နေပြီး ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုများပြုလုပ်နေကာ တစ်ရက်လျှင်ရိုက်နှက်ခံရသူ အနည်းဆုံး ဆယ်ယောက်ခန့် ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ထို့​ပြင် ယင်းကဲ့သို့ ရိုက်နှက်ပြီး၎င်းတို့နှင့်စကား ပြောဆိုမှု အဆင်မပြေသူများအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကာ မည်သည့်နေရာသို့ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားသည်ကိုလည်း မသိရှိရကြောင်း သိရသည်။
မအူပင်မြို့အား Stay Home အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိဘဲ နေအိမ်ပြင်ပသို့ ထွက်မည့် ဒေ သခံပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုဗစ်စည်းကမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ဒေသခံပရဟိတအသင်း အဖွဲ့များမှ တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ဓာတ်ပုံ – မှောက်ခိုင်းပြီး ဝါးရင်းတုတ်ဖြင့် အရိုက်ခံရသည့် ဒေသခံ တစ်ဦး၏ ဒဏ်ရာများ
#မအူပင် #ပြည်သူများ #ဝါးရင်းဒုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက် #စစ်ကောင်စီ #COVID19 #MPA
People Out Mask-less Flogged in Maubin Township
In Ayeyarwaddy region’s Maubin township, the military is performing checks and those who go out without wearing masks are punished with flogging by the SAC military.
The majority of those who go out are for shopping and if they forget to putamask on, the SAC military soldiers are punishing by flogging.
“The majority do put on masks. There’s no one who go out for no reason. There are some who forget to wearamask while shopping. If mask-less, they flog with bamboo rods. They say they do so, so that they don’t forget to put it on next time,” saidaMaubin resident to MPA.
The SAC soldiers are waiting holding bamboo rods performing checks on the streets which lead to the town from Maubin town circuit road and villages in the township area and about ten are getting flogged every day, he continued.
Besides flogging them, if they have any inconveniences conversing with them, they just take them away with themselves and nothing is known about where they are taken.
No home-stay rule has been imposed in Maubin and the charity organizations are the ones urging the public to abide by COVID-19 rules when they go out.
Photo _ Flogged wounds ofalocal flogged with face down
#Maubin #Public #Maskless#FloggedwithBambooRod #SAC #COVID19 #MPA